News | milk
News | Tag: milk
यी चिजसँग खानुहुँदैन दुध !
काठमाडौं । दूध (गाई–भैँसी या अन्य घरपालुवा जनावरको) मानिसका लागि एक अत्यावश्यक पौष्टिक आहार हो । बच्चादेखि वृद्धसम्मका लागि दूध उपयोगी पेयपदार्थ हो ।
माछा र दुध एकैसाथ खानु विष खाए बराबर !
कतिपय खानेकुराहरु एकैसाथ खानहुँदैन । त्यसैमध्येको एक हो माछा र दूध । माछा खाएपछि दूध पिउनुहुँदैन भन्ने कुरा हामीमध्ये धेरैलाई थाहा छ ।
काठमाडौं । बेसारलाई छाला, पेट तथा अन्य रोगका लागि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । त्यसैले त आयुर्वेदमा बेसारलाई सबैभन्दा राम्रो प्राकृतिक एन्टिबायोटिक भनेर व्याख्या गरिएको छ ।
पत्थरीको समस्या दूधमा तुलसीको पात उमालेर खानुपर्छ
दुधसँग यी चिजहरु मिसाएर खाँदा अमृत समान
स्थ्यका लागि दुध लाभकारी छ । दुधमा प्रसस्त मात्रामा प्रोटिन पाइन्छ । सादा दुधलेनै शरीरलाई कतिपय रोगबाट टाढा राख्छ, भने यसमा यी खानेकुरा मिलाएर खाइयो भने झन राम्रो हुन्छ ।
बिहान दुध सेवन गर्नु रोग निम्त्याउनु !
दुध र बेसार सेवनले कान दुख्ने समस्या पनि समाधान हुन्छ